Unokundinceda ukuba ndiqonde amagama angu-Amazon ngeengcebiso kunye neengcebiso?
Ngaphambi kokuba nantoni na enye, makhe siqale ngeenkcazelo ezithile ezisisiseko kunye neengcamango eziphambili malunga namazwi e-Amazon, alandelwe ngeengcebiso kunye nezinye iingcomo ezisebenzayo ezivela kwiziko lolwazi. Ngoko, yintoni eyenza uphando lwegama eliphambili, ngokukodwa kwimbono ye-intanethi ye-intanethi yokuthunyelwa kwe-intanethi kunye neengcamango zanamhlanje zorhwebo lwe-ecommerce ezithathwe kwizinga? Ukuhlaziywa kwezinto ze-Amazon kunye nokwenza uphando lwegama elingundoqo olufunekayo ukugqiba lo msebenzi kuthethwa ngokuba yinkqubo ebanzi yokuhlola kunye nokuphicothwa okujoliswe ekuqokeleleni amagama abalulekileyo afanelekileyo kunye nemigqa ende yomsila esetyenziswe ngabathengi abaphilayo ukwenza uphando lwemveliso (umzekelo, Igama lomkhiqizo, uphawu lomxholo, isihloko, okanye intetho).
Kodwa ngaba kunokwenzeka ukuba onke amagama okucinga kunye nemibandela malunga nomkhiqizo othile ukufunyanwa kwindawo enye? Usenokuba uqikelele ukuba akukho, ayikho. Kwaye kuthetha ukuba nangona kukho ezininzi zezixhobo zophando eziphambili ezifumaneka kwiWebhu, akukho ixesha elincinane elisele ukuba uchithe kwinkqubo yophando kunye nokulungiswa kohlu. Kwaye nakhu xa kukho iziphakamiso ezisebenzayo malunga nama-keywords ama-Amazon kunye nokubhala uluhlu. Ngezantsi ndiza kukubonisa isikhokelo esincinci sokugqiba yonke into.
UkuLungiswa koMveliso kweeMveliso kwii-Amazon kunye neengcebiso eziphambili
Nazi ezinye izicwangciso zokuzicwangcisa ze-Amazon kunye neengcebiso zokukunceda. Ngenxa yokuba uhlala unele ngokwaneleyo ukuba udlulise isicwangciso esiphambili sophando lwegama elingundoqo (kunye nokuqonda okukhuphisanayo kunye nethuba lokuthengisa imveliso), ngokuqinisekileyo uya kufumana oko ufuna. Ndiyathetha ukuba kukho uluhlu olukhulu lwamagama athile kunye nemigama yokukhangela efanelekileyo-nje kulindele ukuba isetyenziswe ngokubhekiselele kwi-indexing, inkqubela phambili ephezulu, kunye nokuguqulwa okukhulu. Yonke into ilula kakhulu - imveliso yakho isondelelene nokulindela okwenene okulindelekileyo kunokuba kukho, abathengi abangakumbi banokuguqulwa kuba ngabathengi bakho. Isinyathelo esisodwa: Qala ngeThuluzi elifanelekileyo
Kakade, akukho sixhobo esilungileyo ukunika ngokukhawuleza amagama angundoqo ama-Amazon okanye naziphi na iingcebiso zokuqinisekisa ukuba ziphi na iziphumo ezikhawulezayo nezipheleleyo..Nangona kunjalo, ukuqala ngezona zinto ezisisiseko kunye nokukhangela kwi-Google Name Keyword Planner mhlawumbi isisombululo esihle kakhulu sokukhawulela ukujonga imiqulu yokukhangela yangoku kwaye ulungiselele uluhlu oluphambili lwezinto eziphambili ezithandwa ngabantu abakwaGoogle ukufumana oko bakudinga kuzo zonke phezu kwehlabathi. Ukwenza njalo, isinyathelo sakho esilandelayo kukuba udibanise yonke into kwaye ugcine kuphela amagama angundoqo aza kukunceda uluhlu lwakho.
Inyathelo lesibini: Khangela i-Intengiso ngokuthe ngqo Ukukhangela imigudu
Phakathi kwazo zonke ezinye iicomputer zophando kunye nezixhobo zokulandelela ezikhoyo ngoku, ndincoma ukuthatha enye abalandelayo abancedisi be-intanethi ukufumanisa iindlela zokukhangela zangempela-zombini kwi-Amazon, kunye nezinye iindawo zokuthengisa iimpahla zihlala zifumana ukuhlengahlengiswa kwemveliso efana nokusebenzisa izisombululo zokucwangcisa phambili (oko kukuthi, ezinye iiplani ezithengiswayo eziphezulu, ezifana ne-eBay, Alibaba, iWalmart, njl). Ngoko, ixesha lokuba ekugqibeleni uqale ukuhlola i-niche yakho kunye namathuba omgangatho womkhiqizo wee-keywords ze-Amazon kwaye ufumane iingcebiso ngeengcebiso ezixabisekileyo ezilungele ngqo kuwe. Zive ukhululekile ukuzama enye yalezi zixhobo zokulandelela amafutha kunye nezixhobo zokuhlalutya: I-KeywordInspector, i-Scope, Amagama omthengisi kunye neScientific Seller. Zonke ziyi-frameworks ezibonakalisiweyo zeteknoloji okanye iinkqubo zesoftware ezenzelwe ukukunika umfanekiso opheleleyo wee-keywords ze-Amazon, iziphakamiso ezisebenzayo kunye neziphakamiso zengqondo zangempela-zithathwe ngqo kwi-search shopper, okanye zithatha ngokuthe ngqo kubathengisi abahamba phambili abathengisa udidi.